Honda Jikọọ maka Honda Civic, Civic Tourer na CR-V | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Ngwaọrụ ndị ọzọ
na NVIDIA mbụ atụmatụ iburu ibe Tegra ya n'ime ụgbọ ala nyerela mkpụrụ mbụ ha.
Honda ekwuputala usoro infotainment nke mbụ ya akpọ Honda Jikọọ, ịbụ onye nrụpụta ụgbọ ala 19th iji tinye ihe nhazi NVIDIA kamakwa onye mbụ ịgbakwunye gam akporo na ngwakọta a. Ekwesiri ikwuputa na anyi no na sistemu a nwere ihe jikọrọ ya na gam akporo Auto.
1 NVIDIA na M / O 2014
2 Honda mbụ
3 Ọ bụghị gam akporo Auto
4 Mgbe ole?
5 Gam akporo Auto n'oge na-adịghị
NVIDIA na M / O 2014
Ọ dịlarị na M / O 2014 mgbe NVIDIA gosipụtara ntakịrị ihe ọ ga-abụ nka ya na ugboala, karisia ya na akara ohuru ya nke ibe Tegra maka ngwa ekwenti.
NVIDIA bụ ọkachamara n’ịhazi ihe oyiyi, eserese eserese na mmepe mgbawa maka ekwentị mkpanaka iji weta arụmọrụ dị elu yana nkọwa dị mkpa na ahụmịhe ọhụụ maka sistemụ infotainment n'ọdịnihu.
N'echiche a, Honda Connect bụ otu n'ime ndị mbụ tinye ahụmahụ NVIDIA niile na omume maka ezigbo ule nke ngwaahịa a ga-ahapụ na ahịa.
The Honda Jikọọ ọrụ interface ga-egosipụta na 7 nke anụ ọhịa ahụ capacitive ihuenyo etinye ya nke ọma na dashboard nke ụgbọ ala ahụ, iji mee ihe maka ọtụtụ atụmatụ dị ka igodo satellite, ntugharị AM / FM / DAB, na-egosipụta igwefoto nlele azụ na ọnọdụ nke ụgbọ ala ahụ.
Dịka onyinye, Honda ga-enwe gị onwe gị Honda App Center ibudata ngwa dị iche iche dịka ngwa Aha Radio.
Ọ bụghị gam akporo Auto
Honda Jikọọ enweghị ihe jikọrọ ya na gam akporo Auto a maghịkwa ma ọ bụrụ na oge ụfọdụ n'ọdịnihu ha ga-ejikọta usoro Google a nke e gosipụtara na I / O 2014.
Ọ bụ ezie na ee, Honda n'onwe ya na-eji nsụgharị nke gam akporo, kpomkwem 4.0.4. N'aka nke ozo obughi ihe ijuanya na Honda adịghị ike ihe gam akporo Auto, dị ka usoro Google ọhụrụ a ka dị na mmalite mmalite ya.
Ihe a na-atụ anya bụ na Honda Jikọọ nweta nkwalite na nke ugbu a nke gam akporo oge ewepụtara ya. Aghọtaghị ya na o nwere ụdị ochie nke gam akporo.
Honda Jikọọ ga- nke dị na Honda Civic 2015, Civic Tourer na CR-V nke ga-ada ahịa European na mbido afọ ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ ga-eme ihe izizi ya na ngosipụta ọhaneze na Paris Auto Show 2014 naanị n'izu a.
Gam akporo Auto n'oge na-adịghị
Anyị nwere ohere n'oge na-adịbeghị anya mụta obere ihe banyere gam akporo Auto na otu ọ ga - esi gosipụta njirimara ọrụ doro anya ma dị ọcha ka ọ ghara ịmegharị onye ọkwọ ụgbọ ala n'oge ọ bụla.
Ndị ọzọ nke kachasị nke gam akporo Auto Ọ ga-abụ obere nhazi nke ndị mmepe ga - enwe ike ịnweta ime ka interface a ọkọlọtọ n'etiti ụgbọala dị iche iche agbakwunyere na ikpo okwu Google ọhụrụ a.
Ndị na-emepụta ihe na-eweta gam akporo Auto na ụgbọ ala ha bụ: General Motors, Ford, Chrysler, Audi, Volkswagen, Honda, Hyundai na Nissan.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwaọrụ ndị ọzọ » Honda Jikọọ: Ntuziaka infotainment nke NVIDIA maka Honda Civic 2015
Ọfọn, ka nọ na 2017 HONDA CONNECT bụ ndakpọ olileanya. Ekwentị m, nke dị afọ 2 na ọkara, android 5.0.2, ọ dị ka ọ adabaghị, ọbụlagodi aka m anaghị arụ ọrụ, oku na-apụ mgbe niile. Ihe nchọgharị a churro. Honda na-ezo aka na onye na-ere ahịa, onye na-ere ahịa agwa gị ka ị nwalee ekwentị ọzọ, melite usoro ahụ. Na nkenke, nnukwu ụgbọ ala nwere asịrị na ịmaghị ihe ọ bụ, nke ọma igwefoto azụ ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Zaghachi José María